Ọrụ nkwanye vidiyo niile metụtara coronavirus | Gam akporosis
Echegbula onwe gị banyere Spotify, ebe ọ na-adaghị n'ime ihe ndị a niile ọrụ ntanetị vidiyo nke belatara ogo mgbasa ozi iji guzogide ọchịchọ dị elu na mpaghara ụfọdụ dịka Europe.
Maka na ebe a na mba ndị ọzọ dị na Yurop anyị na-enweta mkpuchi iche n'ihi coronavirus, iji ịntanetị amụbawo nke ukwuu ruo 80% ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya ụbọchị tupu nke a izugbe mkpu mkpu. Ha abụghị naanị Netflix ma ọ bụ YouTube ndị dọrọ aka ná ntị nke a ịkpụ na mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ.
6 Facebook na Instagram
8 Ndị guzobere GeForce
Ọ bụ ya bụ onye mbụ mere mkpebi a n'ihi na ya video ọdịnaya gụgharia ọrụ kasị choro. Kedu nwekwuo ịntanetị jiri 80% Na mba anyị ọ pụtara na ọtụtụ na-eri usoro dị ka a ga - asị na ha bụ donuts. Nke a na - eme ka ojiji data na nnukwu ọrụ dị ka Netflix. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ọdịiche ya:
Belata bandwidth, ma ọ na-enye ohere ọdịnaya 4K ị na-akwụ maka ndenye aha gị kachasị elu
Ebee: Europe na Latin America
Ihe ikpo okwu raara nye video, na, n’agbanyeghi na ha bu obere vidiyo, enwere otutu nde mmadu ana ebiputa oge nile. Ihe ikpo okwu ekpebiela ibelata ogo vidiyo ụbọchị 30 nye ụmụ amaala nọ na Europe. N'ezie, ọ bụrụ na ịnọ n'ụfọdụ mba Europe, ọdịnaya ị na-ebugo ga-abụ HD maka onye ọ bụla hụrụ ya na mpụga kọntinent ahụ.
Anaghị ekwe ka ọdịnaya HD dị maka ụbọchị 30 ka onye ọ bụla na-eji ngwa si Europe
Naanị na Europe n'oge ahụ
The quintessential ọdịnaya gụgharia ọrụ soro mkpebi mere Netflix iji belata bandwit. Ihe dị iche na YouTube bụ na ọ na-ebelata ogo ọkọlọtọ na 480p, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ya, ịnwere ike ịme ya site na ịgbanwe ya na 720p. Nke ahụ bụ ịsị, ọ naghị ejedebe mmeputakwa na mkpebi ahụ, kama ọ na-enye gị nhọrọ.
Belata ogo vidiyo na 480p, ma ị nwere ike ịgbanwe ya na 720p ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwu egwu dị elu
Ọrụ jikọtara data na ịntanetị ebe a na Spain emeela ka bandwidth belata iji nwee ike ịkwado ọchịchọ a mụbara site na mba Europe ọ bụla. Mgbe YouTube na-enye gị ohere bulite ogo ya na 720p, Nkwupụta Amazon Prime bụ iji belata bitrate ma ọ bụ ogo nsị. Ma ọ bụ na anyị ga-achọpụta ya nke ukwuu, mana ịgbakwunye ihe ọkụkụ niile na-ebelata bandwidth nke Amazon Prime jiri.
O belatara bitrate nke ikuku ọdịnaya vidiyo
Na Europe dum
Naanị taa mgbe a tọhapụrụ ya na mba anyị, A manyekwara Disney + ime mkpebi mgbe a bịara n'ibelata ojiji brọdband nke ọrụ gị. Companylọ ọrụ ahụ ekwuputala na ọ na-ebelata iji brọdband 25% iji nwee ike ịnye ọrụ ahụ n'enweghị nsogbu na ụbọchị ndị a nke ojiji nke ọdịnaya vidiyo ka ukwuu.
Site n'iso otu otu, ndị a netwọk mmekọrịta abụọ emeela ihe ma dị ka Amazon ha mere mkpebi iji belata bitrate. Ọ ga-abụ ihe atụ nwa oge na a gaghị achọpụta ya dị ka na nyiwe ndị ọzọ, n'ihi na ha enweghị vidiyo ahụ dị ka etiti etiti, ọ bụ ezie na ọ bụ otu n'ime isi ihe ha dị mkpa.
Ọ bụrụ n'iji ọrụ a, n'ezie ị nwere hụrụ oke ọnwụ mma na video mma. Anyị na-ekwu maka mkpebi 670p na mkpakọ vidiyo dị elu. Ihe na-atọ ọchị bụ na Apple ekwupụtaghị ihe ọ bụla n'oge a.
Ndị guzobere GeForce
Anyị na-ahapụ ọrụ a, raara nye ịgba egwu egwu, maka njedebe na akụkọ maka na ọ naghị ekwe ka ndị ọrụ Europe mepụta akaụntụ ọhụrụ. Ọ bụ tumadi ruru ka mmachi nke sava gị na n'ihu oke iju mmiri nke ndị ọrụ enwere ike ịghọta ya.
una video gụgharia ọrụ usoro nọ na ọnọdụ nke ibelata ogo ọkụ ha na-eme ka mmadụ niile nwee ọ enjoyụ ahụmịhe ha. Site na ịrị elu 80% na ojiji ịntanetị site n'otu ụbọchị gaa na nke ọzọ, ị nwere ike ịghọta. Ugbu a, anyị ga-ahụ ogologo oge ole a na-ebulite mbelata ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ọrụ vidiyo gụgharia niile belatara ogo mgbasa ozi n'ihi coronavirus
Google kwụsịrị mmepe Chrome na Chrome OS n'ihi coronavirus